Atụmatụ Ebumnuche nke Ọdụ Lion maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Mgbe ị nwere egbu egbu ọdụm, ị na-agbaso ụzọ nchịkwa. A na-atụ egwu na oke. Anyị maara na ọdụm mara maka obi ike ha, ike ha na ike ha. A na-egosipụta egbu egbu na agbụrụ a. A na-eme ka ọdụm na-ebigbọ, na-ele anya, dị jụụ ma na-eyi egwu. Ọ dabeere na ihe ịchọrọ na otú onye na-ese egwu chọrọ isi gosipụta nkà ya na akpụkpọ gị.
Ọdụm Lionụ pụtara
Ogbugbu #lion na-adịkarị mma n'anya ya na okwu banyere mpako, obi ike, eze na ume. E nwere ihe dị iche dịka omenala. Ọdụm pụkwara ịpụta ịdị ọcha, ike, obi ike, obi ike, iguzosi ike n'ihe, ikike, nchedo, ime ihe n'eziokwu, ike, iguzosi ike n'ezi ihe na ikike. Ihe eji akpa egbu egbu bu ihe di mkpa nke mere otutu mmadu choro ichota ihe ha choro. Ọdịdị ahụ dị mma ma nwee ike ikpuchi ihe ọ bụla nke anụ ahụ ọbụna akụkụ kacha nta dị ka mkpịsị aka.
Echiche ndị na-ekwu banyere ọdụm bụ ihe na-eme ka ha bụrụ otu n'ime ihe kacha mma ị ga-etinye. Ọdụm abụọ e gosipụtara n'azụ na-agwa anyị banyere ọdịda anyanwụ na ọdịda anyanwụ ma ọ bụ ọbụna East na-abịa izute West. Ọdụm nwere ike ikwu okwu banyere nduzi ma nwee ike ịhụ ya na ebe nsọ ma ọ bụ nke a na-asọpụrụ gburugburu ụwa.
Ụdị na egbu ahụ na-abịa ma chọpụta ọtụtụ ihe kwa. Ị nwere ike ikpebi agba na ọdịdị nke egbu egbu. Nhazi ihe dị oke mkpa nke bụ ihe mere anyị ji hụ ụdị ọdụm dị n'akụkụ dị iche iche nke ahụ. Ihe okike nke igbu egbu bụ ihe ịtụnanya.
1. Cool aka uwe echiche egbu egbu ọdụm maka ụmụ nwanyị
2. Ezigbo ọdụm mkpịsị aka mkpịsị aka maka nwanyi
N'adịghị ka akara elephant ndị na-adịghị ewu ewu, ọdụm ọdụm na-ewu ewu na akpụkpọ anụ nke ọtụtụ ndị na-egbu egbu. isi iyi
3. Echepụta echiche egbu egbu ọdụm maka ụmụ nwanyị na azụ
Ị nwere ike ịhọrọ ịbụ onye okike mgbe ị na-ahọrọ oke egbu egbu ọdụm gị. Echegbula banyere nha. isi iyi
4. Ezigbo ịhụnanya echiche igbu mmadu na-egbu egbu egbugbu maka ogwe aka
Ị nwere ike ikpebi otú ị chọrọ ka ọdụm gị dị na akpụkpọ gị. Site n'enyemaka nke onye na-ese nkọ, ị ga-enweta ụdị egbugbu ahụ dị mma n'ahụ akpụkpọ gị. isi iyi
5. Ọdụm dara ụda aka tattoo echiche na ozi; atụla ụjọ
Ụfọdụ ndị na-ahọrọ ịnwe isi isi ọdụm na-anọchite anya ya mgbe ndị ọzọ chọrọ ka akụkụ niile ahụ dọrọ. isi iyi
6. Acha aka Roses na ọdụm egbu egbu maka umu nwanyi
E nweghị ụdị ọdụm ọdụm ị na-ahọrọ nke ahụ agaghị adị ịrịba ama. Ị nwere ike iji agba dị iche na ọdụm gị mee ka ị dị iche na ihe ndị ọzọ na-eji. isi iyi
7. Amazing ogwe aka nke ọdụm ọdụm maka ụmụ agbọghọ
Anyị ga-agwa gị na agba na nhazi ị họọrọ bụ ihe ga-adị iche na gị site na ndị ọzọ. Ọbụna ị nwere ike igwu na agba na manụ, ọnụ, anya na akụkụ ahụ ọzọ. isi iyi
8. Obi ntu oyi na-egbuke egbuke egbugbere ọnụ maka ụmụ okorobịa
Otu n'ime ihe okike ị nwere ike ịhọrọ mgbe ị na-abanye n'ime ya bụ inwe ebe obibi ebe ọdụm nwere ike ịgwakọta. Mgbe ị nwere nzụlite nke dị mma, ị ga-enwe egbu egbu ọdụm nke na-adịkarịghị adị. isi iyi
9. Echiche egbugbere ọnụ ọdụm egbugbere ọnụ maka ụmụ nwoke
Anyị aghaghị ịgwa gị na ọnụ ahịa tattoos dị iche. Ogo buru ibu, ya ka ọ na-efu. isi iyi
10. Okooko osisi na ọdụm mara mma ink egbu egbu maka ụmụ agbọghọ na ọkara aka
Ugbu a na ị dị njikere iji egbu egbu ọdụm ahụ, ọ bụ oge ịhọrọ akụkụ nke ahụ ị chọrọ ka ọ bụrụ. Ọ bụghị naanị nke ahụ, ị ​​ga-abụrịrị ịmepụta onye na-ese ihe iji mee ka ị zoo gị. Ndahie na-ezighi ezi nwere ike ime ka ị ka njọ karịa obi ụtọ. isi iyi
11. Ọdụm na-agbọ ụja aka aka echiche maka ụmụ okorobịa
Ebe nrụọrụ weebụ ebe ụfọdụ ndị na-ese ihe na-egosipụta ọrụ igbu egbu ha nwere ike ịbụ ebe ị ga-amalite ịchọ onye na-ese gị ma ọ bụrụ na ịnweghị. isi iyi
12. Uwe aka na-agagharị egbuke egbuke echiche maka ụmụ nwanyị
Mgbe ị nwetara onye na-ese ihe, ị ga-aga n'ihu na nkọwa nke ihe ịchọrọ imezu na njedebe nke ụbọchị ahụ. Nhọrọ ahụ bụ nke gị. isi iyi
13. Ezigbo ọdụm ink egbu egbu maka ndị ikom nọ n'obi
Pịa ebe a maka ihe ndị ọzọ ọdụm Lion
arịlịka arịlịkaụmụnne mgbuakpị akpịmehndi imewemma tattoosegbu egbu ebighi ebiegbu egbu hennaegbu egbu osisi lotusenyi kacha mma enyizodiac akara akarandị na-egbuke egbukeUche obiudara okooko osisiAnkle Tattoosechiche egbugbuakwara obiagbụrụ eborip tattoosakara ntụpọGeometric Tattoosegbu egbu egbuegwu egwuegbugbu egbugbuazụ azụụkwụ akakoi ika tattoon'olu oluna-egbu egbuegbu egbu okpuenyí egbu egbuaka akana-adọ aka mmaokpueze okpuezeaka mma akaEgwu ugoọdụm ọdụmaka akandị mmụọ oziegbu egbu diamondegbu egbuNtuba ntugharingwusi pusiỤdị ekpomkpannụnụegbu egbu maka ụmụ nwokeegbugbu maka ụmụ agbọghọọnwa tattoosdi na nwunyeegbu egbu mmiriima ima mma